Iphupha malunga noMothuko Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha lokothuka. Njengomgaqo ngokubanzi, onke amaphupha amnandi okanye amabi anentsingiselo, funda kwesi sikhokelo indlela yokuwatolika.
Amava asoyikisayo njengokuwa, okuhlala kwenzeka ukusuka kubude obukhulu, yeempawu zeephupha ezinokuvela rhoqo kwaye zichaphazele kakhulu umntu ophuphayo. Ngokuchasene nohambo okanye ukuwa, ukuwa kutolikwa ephupheni njengokubi kakhulu kwaye kufikelela kude. Ngamanye amaxesha isizathu sokuwa asichazwanga ngokuchanekileyo.
Yeyiphi intsingiselo ngqo yesimboli yephupha "yengozi"? Ukuphendula lo mbuzo, la macandelo alandelayo achaza iimeko ezithile zamaphupha ezinxulumene nokuwela ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «ingozi»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukuphazamiseka ngezithuthi zomoya ephupheni.
1.1.1 I-zeppelin yengozi ephupheni
1.1.2 Iphupha malunga nokuqhekeka kwibhaluni yomoya oshushu
1.1.3 Nceda, ayiphaphi! Ihelikopta yengozi ephupheni.
1.1.4 Uwele ngaphandle: ungqubana ephupheni nenqwelomoya
1.1.5 Kusondele kwaye ubuqu! Bona ukuphazamiseka kwendiza ephupheni.
1.1.6 Iphupha malunga ne-UFO
1.2 Ukungqubana nezinye iindlela zothutho ephupheni.
1.2.1 Ukudibana nemoto yekhebula ephupheni
1.2.2 Iyaya ezantsi kuphela! Iphupha lokuwa kwilifti
1.2.3 Iphupha elibi: ukuphazamisa eyakho imoto
1.2.4 Ingozi yebhasi ephupheni
1.3 Ukuphupha ukuwa ezindlwini okanye ezintabeni
1.3.1 Ukutolika iphupha: ukuwa endlwini
1.3.2 Akukho ncopho emehlweni: ukuwa kwentaba ephupheni
1.4 Abanye abantu bayangqubana ephupheni
1.4.1 Ukudibana nomlingane ephupheni
1.4.2 Ukuphupha ngokuwa komntwana
1.4.3 Ukubona ukonakala ephupheni
1.5 Kwakukufuphi oko! Ndiphantse ndatshayisa ephupheni
2 Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ingozi»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukuphazamiseka ngezithuthi zomoya ephupheni.
I-zeppelin yengozi ephupheni
Ngubani ophupha ingozi kaZeppelin, unokufuna ukuqaphela ukuba ubunzima buza kuza kumphuphi ebomini. Kungenzeka ukuba usemngciphekweni omkhulu okanye ubukho bakhe bukhona ingozi enkulu ngenxa yempazamo enkulu kubomi beshishini. Inqwelo-moya eyaphukileyo ibonisa umntu oleleyo ukuba acele uncedo kubantu abathembele kuye.
Iphupha malunga nokuqhekeka kwibhaluni yomoya oshushu
Ukuphahlazeka kwebhaluni yomoya oshushu ephupheni kuxelela umntu ophuphayo ukuba akucaci ncam malunga nendlela yakhe yobomi. Umntu owayephupha wazama ukufumana ukujonga imeko yakhe yangoku. Ngokwenza njalo, usenokuba ukhe wayicinga indlela amatsha mathuba enokuvulelwa yena kwinqanaba lobuchule okanye labucala. Ingozi yebhaluni ngoku ibonisa ukuba umphuphi akakasifumani isisombululo esifanelekileyo.
Nceda, ayiphaphi! Ihelikopta yengozi ephupheni.
Ukuba umphuphi ufumene ingozi yehelikopta ukuba yena ubhabha, lo mfuziselo wephupha kufuneka umxwayise ngokuchasene nokuzikhukhumalisa kakhulu. Ngokunokwenzeka umphuphi kutshanje uziphathe kancinci kwaye wazikhwebula koontanga bakhe. Njengokuba ihelikopta itshona ephupheni, umntu oleleyo ngoku ubuyela ezantsi kwiinyani. Kuya kufuneka uthathe eli thuba ukuphinda unxibelelane nabantu.
Uwele ngaphandle: ungqubana ephupheni nenqwelomoya
Nabani na onamava ephupheni ukuba uhleli kwinqwelomoya eyaphukileyo kufuneka abuze ngokunzulu iinjongo zakhe kunye neminqweno yakhe ebomini. Kungenzeka ukuba umntu ophuphayo uqaphele iinjongo ezingenakwenzeka, ezingonelanga. Ke ukuba uphupha ngengozi yenqwelomoya, kuya kufuneka uthathele ingqalelo amathuba akho okwenyani.
Kusondele kwaye ubuqu! Bona ukuphazamiseka kwendiza ephupheni.
Ukubona inqwelo-moya okanye inqwelo-moya yokulwa okanye ukutshiswa inakho ephupheni, kwelinye icala, ukoyika ukuhamba ngenqwelo moya kunye noloyiko oluthile ngaphambi kokubhabha. Isimboli yamaphupha "indiza yokulwa ngenqwelomoya" ikwatolikwa kuphando lwamaphupha njengesilumkiso kumntu ophuphayo. Yalatha ukuba ezinye izicwangciso zisilela, ke abaphuphi mabaqwalasele ezinye iindlela.
Inqwelo-moya eyaphukileyo evuthayo kumava ephupha inokuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo: Amalangatye aqaqambileyo angabonisa ulonwabo nempumelelo ikamva kubomi babucala okanye kubungcali. Umsi omnyama ophuma kwinqwelomoya, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, kunokwenzeka ukuba ubonakalise ukusilela kunye noloyiko lwekamva.
Iphupha malunga ne-UFO
Ukuphahlazeka kweUFO kubonakala ngathi ngamava aphupha ngokungekho ngqiqweni. Umntu ophuphayo ngokucacileyo uthanda ukuba alahleke ngokukhawuleza kwilizwe elimnandi elingafakwanga kwinyani. Ngamanye amaxesha oku kunokuba luncedo ekugcwaliseni kwakhona iibhetri kubomi bemihla ngemihla. Ekuhambeni kwexesha, ukuphupha kuya kulahla umbono weemfuno emsebenzini nakubomi babucala. Kungenxa yoko le nto "UFO ungqubano" isimboli yamaphupha ikucela ukuba ugxile ngakumbi kwizibophelelo zakho kunye neemfuno ngokwenyani.
Ukungqubana nezinye iindlela zothutho ephupheni.
Ukudibana nemoto yekhebula ephupheni
Nabani na ophupha ngengozi yemoto yentambo kufuneka alumke angangxoli okanye azikhukhumeze. Mhlawumbi ukuphupha kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba usebenze nzima ukuze ufezekise impumelelo kunye nokwamkelwa, kuba kubonakala ngathi uyifezile yonke. Nangona kunjalo, obu bubuxoki.
Iyaya ezantsi kuphela! Iphupha lokuwa kwilifti
Ukuba uwela kwilifti ephupheni, la ngamava abuhlungu kubantu abaninzi. Ke ngoko, uninzi lwazo lungena kwilifti kuvava isicaphucaphu. Ingozi yekheshi emva koko inokuchazwa njengombonakalo wemvakalelo ye ukoyika. Nangona kunjalo, oku kunokuhambelana nezinye iinkalo zobomi.
Ngengqondo yokomfuziselo, ingozi yelifti ixelela umphuphi ukuba angazibekeli iinjongo ezingafikelelekiyo. Ingozi kwilifti nayo ifuna ukulumkisa umntu ophuphayo ngokuchasene amabhongo agqithisileyo. Akufuneki uthathe inxaxheba kwiiprojekthi ezinokuthi zisilele kuwe. Endaweni yoko, kusengqiqweni ukulandela iinjongo ezihambelana nobuchule bephupha.
Iphupha elibi: ukuphazamisa eyakho imoto
Ukudibana nemoto, umzekelo kwingozi yemoto, kunokuba ngamava aphuphayo abangela inkxalabo enkulu. Mhlawumbi ngexesha lokuphupha ngengozi yemoto naye woyika ukufa xa ecinga ukuba naye usemotweni engqubekayo. Ingozi yemoto ikwabonisa umntu ophuphayo ukuba okwangoku abanako ukuzithemba ngokwaneleyo kwaye banokubethwa tha ndabuza. Oku kunokuba ngenxa yeziganeko zangaphambili ezinokuthi zisamcaphukisa umntu ophuphayo.
Ingozi yebhasi ephupheni
Ukuba umntu uphupha ukungqubana nebhasi, ukuwa eweni kwingozi yemoto, umzekelo, umntu ophuphayo unokuziva elawulwa ngabanye. Mhlawumbi kukho abanye abantu ebomini baphuphi abamthintelayo ekuziqondeni okanye afune ukumlimaza. Ke ngoko, umntu oleleyo unokuziva engakwazi ukuzinceda ngaphakathi kuye.
Ukuphupha ukuwa ezindlwini okanye ezintabeni
Ukutolika iphupha: ukuwa endlwini
Nabani na ofumana ingozi yasekhaya ephupheni kufuneka akuqonde oku njengesilumkiso sokungangxami. Ngokufanelekileyo, umntu ophuphayo uthanda ukwenza izinto zokungakhathali angakhange acinge kakuhle ngazo. Ngayiphi na imeko, umphuphi akufuneki ajongane neeprojekthi ezinobungozi kungekudala.
Ukuwa phantsi kumgangatho osezantsi wendlu liphupha elilumkisa ngezenzo zokungxama.
Akukho ncopho emehlweni: ukuwa kwentaba ephupheni
Ukunyuka intaba kwaye ujonge ezantsi entlanjeni usuka phezulu unokujika ngokukhawuleza ube liphupha, oko kukuthi, xa umntu ophuphayo esiwa entabeni. Olu phawu luphupha lubonisa umntu ophuphayo ukuba kungenzeka ukuba benze ngokungakhathali kwaye ngokungxama mva nje. Kwakhona, ukuwa entabeni kunokuthetha ukuba umntu ophuphayo uqaphele iinjongo ezingenakwenzeka ongakwaziyo ukufikelela kuzo. Kusenokufuneka ulahle ithemba.
Abanye abantu bayangqubana ephupheni
Ukudibana nomlingane ephupheni
Ukungqubana neqabane lakho kunokubonisa njengamava ephupha ukuba iphupha lityeshele ulwalamano lwakho mva nje, oko ke kusongela ukwahlukana. Umntu ophuphayo kufuneka aqonde isimboli sephupha "ukuwa" ngokunxulumene neqabane njengesicelo sokuzisa inkuthazo entsha kubomi bakhe bothando. Nangona kunjalo, ngokwenza njalo, kuya kufuneka uhlale unyanisekile kwaye ungabi nolindelo oluphezulu kakhulu kwiqabane.
Ukuphupha ngokuwa komntwana
Ukuwa komntwana kuhlala kubonakala kuphando lwamaphupha njengophawu lwelahleko ezayo, ngakumbi ukuba bayawa kwizinyuko. Ukuwa komncinci kwibhalkoni okanye ngefestile kulumkisa umntu ophuphayo ikratshi.
Isimboli yephupha nayo inokuchazwa ngokufanelekileyo. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba umntwana uwela equleni, emngxunyeni, okanye kwibhulorho. Iphupha ke linokuziqhelanisa notshintsho ebomini, olunokuthi luzise impumelelo kunye nokwamkelwa okuninzi.
Ukubona ukonakala ephupheni
Ukubona ukuwa ephupheni okanye ukubona umntu ongamaziyo okanye umntu ohamba ngocingo oluqinileyo esiwa, kungabonisa ukuba umntu ophuphayo kungenzeka ukuba ukhathazwa luloyiko lokusilela kunye nelahleko. Kungenzeka ukuba xa uphupha uxhalabile ngabantu abakungqongileyo xa uphupha ubona umntu esiwa okanye esiwa. Ngayiphi na imeko, umntu oleleyo kufuneka aqonde unobangela wezi mvakalelo ukoyika ukuze ndikwazi ukuzisusa.
Kwakukufuphi oko! Ndiphantse ndatshayisa ephupheni
Ukuba uphuphe uphantse ukuphazamiseka, ungaphefumla: umntu ophuphayo usindile engozini okanye uzikhulule kwimeko eyingozi. Isimboli yephupha kufuneka iqondwe njengesilumkiso kulowo uphuphayo: kuyacetyiswa ukuba wenze okungakumbi isilumkiso kunye nengxoxo kwixa elizayo, kungenjalo inokusongela intlekele entsha.
Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolikwa ngokubanzi
Umothuko ephupheni uhlala esoyika ubomi kunye nokungaqiniseki komphuphi. Amaxesha amaninzi olu phawu luphupha lukwabonisa ilahleko, ezinokuchaphazela ukulala kwakho, kodwa nabanye abantu. Oku kulahleka kunokuchaphazela imbeko, udumo, amandla, okanye ubutyebi. Iimpazamo kunye novavanyo olungachanekanga ziyatyhilwa kwaye zicaciswe ngokomfanekiso ngengozi.
Kwamanye amaphupha, iparashute iyavula xa uwa. Oku kuhlangulwa kwimeko ebeka ubomi esichengeni kutolikwa njengophawu lokuba umphuphi kufuneka oyise i- Yintlungu.
Ukuwa ngenxa yokutsiba okunesibindi, umzekelo ngexesha lokubeka isilingi ukuya kuphahla, ibonisa imeko apho ulumke ngayo yonke imisebenzi yangoku. Ukuba awulumkanga ngoku, izicwangciso zakho kunye neeprojekthi ziya kuphuhla ngokugwenxa.
Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokuka-Sigmund Freud, amaphupha awela kuwo umntu ophuphayo aquka elinye inkalo yesondo. Ngokwenkcazo yakhe, ukuwa ephupheni kubonisa ukunqanda oko kukhokelela ekunxibelelaneni nobunzima kubudlelwane phakathi kwabantu abaphuphayo.
Uphawu lwephupha «ungqubane» - ukutolika kokomoya
Kwintetho yokomoya, ukuwa kubonisa Ukuphulukana nolawulo, yamandla noloyiko lokusilela. Ibonisa ukuba umphuphi kwindawo yobomi bakhe unoluvo lokuphulukana nolawulo. Omnye umbuzo obalulekileyo ngowokuba umntu owileyo angathanda ukuphinda abuyele emhlabeni, oko kukuthi, ukuba aqhubeke njani emva kokuwa.